Arisiva Katalana - Zon'Olombelona & Hazavana avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Fihetsiketsehana maivana ho an'i Julian Assange. Eran-tany. Now!
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 18. Janoary 2019
Aza manontany izay azon'ny firenenao aminao, anontanio izay azonao atao ho an'i Assange, ny fanovana ny filazalazan'i John F. Kennedy tamin'ny jiro amerikana tao Berlin. Ny Amerikanina izay nanao heloka bevava amin'ny ady, avy amin'ny mpanala baraka tamin'ny Adin'i Vietnam izay nahafatesana olona ana hetsiny ho an'ny mpanao gazety novonoina tamin'ny ady Irak, dia tsy maintsy esorina ny fangatahana famongorana azy ireo.
Manaova fanamarihana ho an'ny ampitson'ny fitsarana; 25.02. no datin'ny fitsarana fanonganana any Etazonia.
Ary satria efa nafenina hatrizay hatrizay ary tsy misy governemanta miandany amin'i Julian, azo antoka fa hatolotra ny Amerikanina ny anglisy. Izany no antony mahatonga an'ity volana ity, hanomboka hiresaka amin'ireo masoivoho amerikana isika any ivelany, ny White House ary ireo trano any Etazonia any ivelany izay misy fihetsiketsehana maivana ary fanelingelenana artista.
Manome vola izao mba hanaovana izany, na 333 euro na 5 euro, fanampiana kely fotsiny! Ataovy zavatra ho an'ny kalitaon'ny fampahalalana rahampitso, miorina amin'ny hevitra tokony handraisanao fanapahan-kevitra!
Tsy maintsy mamela ny helok'i Julian Assange ny mpanjakavavy
Raha diso fanasaziana ny fahazoana sy fitsinjarana ireo hafatra miafina ny hasin'ny besinimaro, inona koa ny vaovao hafa? Ny governemanta no manapa-kevitra izay voasokajy ary inona ny tsiambaratelo.
Fanararaotana ny herin'i Etazonia manohitra #Assange tsy mampino: narary mafy izy tany am-ponja farany indrindra, efa ho faty. Na iza na iza mamonjy scout dia mamonjy fahafahana! Mbola manohy mipetraka ao Moskoa koa i Snowden satria ny firenena tandrefana rehetra matahotra ny valifaty ataon'ireo Amerikana.
@wikileaks dia fahavalon'ny fitantanan'i Etazonia hatramin'ny taona 2010. Mangataka famotsorana avy hatrany izahay #JulianAssange tamin'ny fitazonana azy tany Londona. Tsy maintsy mamela ny helony avy hatrany ny Queen ary manome fialokalofana ara-politika.
Fikomiana maivana amin'ny masoivoho United Kingdom
Fanentanana taloha ho an'ireo gadra politika hafa
Tsy tokony hampiasaina hanenjika ireo mpanohitra ara-politika ny didy fampisamborana Eoropeana. Ny fitsarana alemana dia manana antony tsara tsy hamoaka an'i Carles Puigdemont ho any Espana. Ny lalàna heloka bevava dia hita indray ho fitaovan'ny fifandirana an-trano sy ny fanenjehana ireo mpanohitra ara-politika amin'ny fomba mahatsiravina. Ny fitsarana alemana dia tsy tokony handray anjara amin'ny adihevitra ara-politika ao Espana fa tsy ny kely indrindra, avy amin'ny traikefa ara-tantara mahatsiravina momba ny fanamelohana ny politika, tsy manome fiarovana. Raha manaiky ny fandefasana azy izy dia misokatra ny lalàna ary mety halefa any amin'ny Fitsarana Federaly Federaly ny Catalan. Farany dia tokony omena laharam-pahamehana ny zon'ireo olona amin'ny lalao amin'ny herinaratra ao Espana.
→ Mpigadra Katalana 10 migadra
1. Jordi Cuixart - 161 andro am-ponja
2. Jordi Sànchez - Andro 161 am-ponja
3. Oriol Junqueras - 144 andro am-ponja
4. Joaquim Forn - 144 andro am-ponja
5. Dolors Bassa - Nogadraina fanindroany talohan'ny andro 3
6. Raül Romeva - nigadra fanindroany talohan'ny andro 3
7. Jordi Turull - nigadra fanindroany talohan'ny andro 3
8. Josep Rull - nigadra fanindroany talohan'ny andro 3
9. Carme Forcadell - nigadra tao amin'ny 3 andro lasa izay
10. Carles Puigdemont - Nogadraina talohan'ny andro 3
→ Ankoatra izany, ireo mpanao politika manaraka dia atahorana am-ponja ary miaina amin'izao fotoana izao any an-tsesitany:
Mikarakara printy & fisainana - ampio izahay izao! Amin'ny maha-mpanome anao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fientanam-bahoaka ianao - ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa. Ho resa-pihetsikao izao ary mety ho fanalam-baraka misy sisintany azo atao. Tsy misy mihitsy ny fikomiana sy ny fikomiana ho an'ny Euro rehetra nomena anao eto. Tsidiho azafady ny tranokalanay: PixelHELPER.org/ Manomeza na manohana ny Facebook Fundraiser:
Mpanao dokam-barotra: Dirk-Martin Heimzelmann
Mpanazava Light: Mpikambana ao amin'ny PixelHELPER
Fahalalahana ho an'i #Puigdemont voasoritra ao amin'ny fonjan'i Stasi any Berlin. Manao hetsi-panoherana ny fitazonana tsy ara-dalàna ny mpanao politika Katalana any Espaina izahay. Miantso izahay mba hamotsorana tsy misy hatak'andro ireo gadra politika rehetra eto Espaina. #PixelHELPER mandrisika ny governemanta federaly hanambara avy hatrany fa tsy hanome alalana ara-politika i Alemana. Izany fankatoavana ara-politika izany amin'ny fangatahana Espaniônan'ny fanampiana ara-pitsarana dia takian'ny lalàna ao amin'ny Lalàna momba ny fanampiana iraisam-pirenena - na inona na inona fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana. Raha jerena ny maha-zava-dehibe ny tranga, ny fanomezan-dàlana dia ny Governemanta Federaly amin'ny endrika Minisitry ny Fitsarana Katarina Barley. Miantso ny governemanta federaly izahay mba hiantohana ny famotsorana tsy misy hatak'andro an'i Carles Puigdemont amin'ny fonja alemana!
Mikarakara printy & fisainana - ampio izahay izao! Amin'ny maha-mpanome anao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fientanam-bahoaka ianao - ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa. Ho resa-pihetsikao izao ary mety ho fanalam-baraka misy sisintany azo atao. Tsy misy mihitsy ny fikomiana sy ny fikomiana ho an'ny Euro rehetra nomena anao eto. Tsidiho azafady ny tranokalanay: PixelHELPER.org/ Manomeza na manohana ny Facebook Fundraiser: https://www.facebook.com/donate/1972507843071293
Ny lohataona Arabo dia ny hitondra ny fandrosoana ary hanomboka vanim-potoana vaovao amin'ny demokrasia. Saingy ankehitriny ireo mpikomy tamin'izany fotoana izany dia gadra politika. Ireo olona nanao vivery ny ainy teo amin'ny fanjakana voatanisa amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny Amnesty International dia efa any am-ponja ary adinon'izao tontolo izao. PixelHELPER dia te-hirotsaka eto ary hanafaka ireo gadra politika.
Ny hetsika voalohany dia ny hitondra ny 13 hiverina ho fahazavana ho an'ireo olona nigadra tao amin'ny 2011 nanomboka tamin'ny Martsa. Ny Bahrain 13 dia nosamborina taorian'ny fitroarana 2011 tamin'ny volana febroary tao Manana, Bahrain, voampanga ho nikomy tamin'ny governemanta. Firenena sy fikambanana maro, anisan'izany ny Amnesty International sy ny Human Rights Watch, dia manondro ny fampijaliana. Nampijalina ny voafonja.
Tsy manelingelina ireo fianakaviana koa ny fanahiana. Mbola gadra amin'izao fotoana izao ireo gadra politika ireo, manompa ny fehezanteny 5 manomboka amin'ny fehezan-teny manoloana ny fehezan-teny maromaro. Manana zo haneho ny heviny ny tsirairay. Aoka isika tsy hanadino ireo olona tsara izay nanao sorona ny fahafahany manokana hitondra ny demaokrasia sy ny fandriampahalemana amin'ny maro.
Fihetsiketsehana maivana ho an'i Julian Assange. Eran-tany. Now! Aprily 21st, 2020Oliver Bienkowski